केन्द्रीय बैंकले १४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै, बोलकबोल कहिले ? « Nepal Bahas
केन्द्रीय बैंकले १४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै, बोलकबोल कहिले ?
प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०७८, सोमबार १०:१९
६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले ९१ दिन, १८२ दिन र १ वर्षको लागि ट्रेजरी बिल जारी गर्न लागेको हो ।
मंगलबार जारी हुने यस ट्रेजरी बिलका लागि आज दिउँसो २ बजे बोलकबोल हुनेछ । केन्द्रीय बैंकले ९१ दिनको लागि २ अर्ब २३ करोडको ट्रेजरी जारी गर्न लागेको हो । यो ट्रेजरी फागुन १० गते परिपक्व हुनेछ ।
१८२ दिनको लागि १२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी जारी गर्न लागेको हो । यो ट्रेजरी २०७९ साल जेठ १० गते परिपक्व हुनेछ । त्यस्तै, १ वर्षको लागि ११ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल जारी गर्न लागेको हो ।
यो ट्रेजरी २०७९ मंसिर ६ गते परिपक्व हुनेछ । ट्रेजरी बिल १ वा १ वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो ।